RW Kheyre oo ka hor yimid magacaabidda Balal & Khilaaf ka dhashtay | SMC
Home WARARKA MAANTA RW Kheyre oo ka hor yimid magacaabidda Balal & Khilaaf ka dhashtay
RW Kheyre aya qorsheynayay in maalinta berrito ah uu u magacaabo Wasiirka Arrimaha Dibadda, safiirka Soomaaliya u fadhiya ururka midowga Yurub, Dr. Cali Saacid Fiqi sida SOUTHERN MEDIA ay u xaqiijiyeen howl wadeenno ka tirsan xafiiska RW Kheyre.
SOUTHERN MEDIA aya la xiriirtay howlwadeenada Madaxtooyada si ay wax uga weydiiso waxaana u dirnay dhowr farriimood. Waa ay ka gaabsadeen in ay tafaasiil ka bixiyaan.
Previous articleXog la Helay: RW Xasan Cali Kheyre oo is Casilaya isuna soo Taagaya Doorashada Madaxweynenimo ee 2020/21.
Next articleFarmaajo oo xilka ka qaaday xeer-ilaaliyihii qaranka, mid cusubna magacaabay